Kacha mma Sugarcraw Straw Manufacturer na Factory | Huanna
A na-eji ahịhịa okpete emee ahịhịa nke okpete. Strawdị ahịhịa shuga ọhụrụ a dị mma maka dochie ahịhịa plastik n'ihi na ọ sitere na ihe sitere n'okike nke na-eji naanị ihe ndị sitere na ahịhịa na akwukwo nri yana obere ume ọkụ n'oge emeputa. Ahịhịa okpete bụ ihe na-emebi emebi wee bụrụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma maka ahịhịa plastik.
Ihe: Okpete Brand aha: NATUREPOLY
Ngwugwu: 10000pcs / katọn Product aha: Sugarcane ahịhịa
Nha: 6mm * 210mm, 7mm * 210mm, nwere ike ịhazi Udi: Kwụ ọtọ
Njirimara: Disposable Eco Enyi na Enwe Mmakọ Biodegradable Asambodo: EN13432, SGS, Akwụkwọ Asambodo Nri
MOQ: 100 000pcs Tụkwasịnụ Ikike: 50000000 Ibe / iberibe kwa izu
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: Ahịhịa okpete
OPP akpa, katọn, cotainer, pallet ma ọ bụ ahaziri Port nke Mbupu: Shanghai
Etiti oge Ibu (katọn) 1 - 50 50
Est. Oge (ụbọchị) 20 Ndi kpakorita
A na-eji ahịhịa okpete emee ahịhịa nke okpete. Strawdị ahịhịa shuga ọhụrụ a dị mma maka dochie ahịhịa plastik n'ihi na ọ sitere na ihe sitere n'okike nke na-eji naanị ihe ndị sitere na ahịhịa na akwukwo nri yana obere ume ọkụ n'oge emeputa. Ahịhịa okpete bụ ihe na-emebi emebi wee bụrụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma maka ahịhịa plastik. Ya mere, ụdị ihe a agaghị emerụ gburugburu ebe obibi ahụ.
Ahịhịa okpete nwere oge ndụ nke ọnwa 10 ruo 12 dabere na ọnọdụ ya na ebe nchekwa ya. Akwadoro ka edebe ya site na okpomoku na iru mmiri. Enwere ike iji ahịhịa ọka mee ihe ọ drinksụ coldụ oyi na ihe ọ drinksụ hotụ na-ekpo ọkụ ruo 70 ℃.
Anyị ụlọ ọrụ Aims na-arụ ọrụ n'ikwesị ntụkwasị obi, na-eje ozi niile nke anyị na-eji ọkụ, na-arụ ọrụ na nkà na ụzụ ọhụrụ na ọhụrụ igwe na-mgbe niile. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kpọtụrụ ịkpọtụrụ anyị site na ibe weebụ ma ọ bụ ndụmọdụ ekwentị, anyị ga-enwe obi ụtọ ijere gị ozi. Anyị bụ ndị gị pụrụ ịdabere na onye na mba ahịa na nke kacha mma mma ibu. Uru anyị bụ ihe ọhụrụ, mgbanwe na ntụkwasị obi nke ewulitere n'oge gara aga ihe karịrị afọ iri. Anyị na-elekwasị anya n'inye ndị ahịa anyị ọrụ dị ka isi ihe na-eme ka mmekọrịta anyị dị ogologo. Ọdịdị anyị dị elu nke ngwọta dị elu dị elu yana ezigbo ahịa ahịa anyị na ahịa na-ere ahịa na-eme ka asọmpi siri ike na ahịa na-arịwanye elu.
Nke gara aga: Akpa Nzipu ozi
Osote: Osisi ịkpụ osisi
Sugarcane Straw Biodegradable
Sugarcane Straws Pla Na-akwụghị ụgwọ